Ny tantaran'ny tovovavy izay nifindra tany Norvezy: ny Olona - Video firesahana amin'ny firaisana ara-nofo. Velona ny fampielezam-peo sy ny Fiarahana.
Ny tantaran'ny tovovavy izay nifindra tany Norvezy: ny Olona
Dia nifindra tany Norvezy amin'ny roapolo
Ny antony dia ny olonaIzaho sy ny namako no vakansy, ary dia nitoetra teo amin'ny namana. Nihaona izahay, dia isan'andro, skyped, matetika samy nandeha. Tao Oslo, dia nahazo diplaoma avy amin'ny ara-Bola University eo ambanin'ny governemanta ao amin'ny Federasiona rosiana. Rehefa nahazo diplaoma dia niara-niasa toy ny auditor any Aotrisy sy any Norvezy. Satria aho dia nanambady, tsy misy olana amin'ny antontan-taratasy rehefa mifindra any Norvezy teraka. Iray volana taorian'ny famoahana ny antontan-taratasy ilaina ireo dia nolazaina taminay avy ny Masoivoho. Voalohany namoaka ny toeram-ponenana vonjimaika fahazoan-dalana nandritra ny telo taona.
Rehefa afaka izany, dia mila mizara ny fanadinana fahalalana ny teny (fifampiresahana anivon'ny), ary indray hanangona antontan-taratasy mba hahazoana fahazoan-dalana honina maharitra.
Ny fianarana ny teny aho no nanomboka nandeha tao Oslo, ary eto foana. Fahalalana ny zavatra sy fianarana teny anglisy anarana dia azo atao asa. Nifindra any Trondheim tanàna fahatelo lehibe indrindra any Norvezy, fa na dia teo aza izany, dia tena kely: izany rehetra izany dia afaka ny ho circumvented tao anatin'ny ora vitsy. Velona eto izao satria ny asako, fa manaraka mikasa ny hamindra toerana ny hifindra any Oslo. An-drenivohitra ihany koa ny tena kely, tsy ampitahaina amin'ny Oslo. Isika dia miaina ao amin'ny faritra izay minitra miala avy any Trondheim. Tao Oslo, dia tsy misy milina, amin ny fitsipika, tsy misy ny rehetra hampiasa ny fitateram-bahoaka. Any amin'ny tanàna kely no mora kokoa ny fiara. Tao amin'ny saha eto mandefa na tany aloha. Izany dia noho ny zava-misy fa ny fiterahana dia ho valo na sivy volana.
Iray taona taty aoriana dia nanapa-kevitra fa hanambady
Afaka misafidy na, fa noho ny fahaverezan-karama.
Matetika rehefa tapitra izany fe-potoana roa volana ny zaza mipetraka amin'ny vadiny.
Ny ankizy eo an-toerana asiana ny tanin-janakazo ny fitiavana, misy ny zaza fahafahana bebe kokoa.
Afaka misafidy izay tiany atao, na ho kivy ny sasany amin'ireo lesona.
Nametraka ny rafitra ny valisoa.
Na dia eo aza izany fahaleovan-tena, ny mpampianatra mampita moramora ny mpilalao inona no tsara sy ny zavatra ratsy. Noho izany, ny mponina maniry mafy ny fahatsapana ny maha-olom-pirenena andraikitra. Raha mahita ny kitapom-bola na kitapo, avy eo dia mety ho avo izany zavatra izany dia ho ny polisy. Avy tena sarotra ny mahita ny fiteny mahazatra ny mponina ao an-toerana sy ny namany teo anivony.
Ny sarotra indrindra ity asa ho ahy dia ny fifandraisana amin'ny mpiara-miasa aminy.
Toa isika mahazo miaraka lehibe, fa na dia enin-taona taty aoriana, dia mahita fa tena mafy foana-dresaka miaraka aminy. Zavatra resaka mandeha toy ny clockwork. Norwegians amin'ny tsirairay koa, mazava ho azy, ny aina. Izy ireo dia nanangana ny olana toy izany nandritra ny antso izay dia tsy eo an-toerana sarotra takarina. Ohatra, nandritra ny fotoana ela mba hiresaka momba ny zavatra kely. Hipetraka ka tsy hahatakatra fa izany no azo atao hafa hanampy. Eo an-toerana tsy miezaka ny mamorona ny mpitsidika ny fahatsapana fa izy ireo no ray any ianao fa ianao no olon-kafa ho azy ireo. Izany dia na dia voararan'ny lalàna. Na dia eo aza izany"validating"dia miresaka tsy am-pihambahambana. Ohatra, raha ny resaka mikasika ny lavitra, dia mety hiresaka momba ny halalin ny farihy tao amin'ny trano fandraisam-bahiny, tsy ny hitan'ny olona, dia inoana mba hizara izay zavatra niainany. Mba hanatevin-daharana ny ekipa mafy ny vahiny rehetra. Tsara vintana fa manana namana ny vadiny, izay lasa namako. Fa, amin'ny fomba rehetra ny mpiara-miasa dia be matihanina. Ny mpianatry ny Oniversite manana zavatra isan-karazany, fa misy kilasy telo. Ny tombony amin'izany dia toerana iray lalina ny fahalalana ny fototry ny Siansa. Ao an-dakilasy tsy misy ny fialàny sy ny tsy tafiditra ao naka tàhaka ny lahatenin'i, downloading fanadihadiana amin'ny Aterineto. Isaky ny tanàna kely iray eto ihany ny tenim-paritra. Ny antokony ho nampianatra fa, raha hoy izy ireo tao Oslo, fa amin'ny fampiharana ianao dia ho afaka ny hahatakatra ny zavatra lazainao, indraindray izy ireo no samy hafa tsy azoko. Ny nanam-potoana, Norwegians matetika mipetraka ao an-trano. Ny zavatra momba ny avo ny vidin-javatra.
Raha roa fotoana mba handeha any amin'ny trano fisakafoanana mahafinaritra, ianao dia afaka very ny ampahany manan-danja ny karama.
Na dia matetika fitsangatsanganana any amin'ny sarimihetsika afaka hivadika ho vola goavana. Nahoana ny olona no manao fanatanjahan-tena ao amin'ny rivotra madio, ny mahandro ny sakafo, mandeha eo amin'ny natiora noho izany dia tsy ilaina ny vola. Dieny mbola kely ny ankizy dia ampianarina mba handeha ho any an-tendrombohitra sy ski, ny karazana pirenena amin'ny fanatanjahan-tena. Tena malaza ara-pahasalamana ny sakafo voajanahary. Ny hena ao amin'ny mazava ho azy fa ny elk, venison, zanak'ondry. Ny ankamaroan'ny olona dia tena lava sy tsara tarehy. Maso sasatra eo aminy. Ny vehivavy dia tsara ihany koa, fa afa-tsy ny tanora. Rehefa telo-polo taona ny zavatra noho ny antony tsy hitsahatra hanaraka azy. Izy ireo dia tsy hoso-doko, ary tsy tena manao akanjo, ary avy eo ny hafa, ary tsy ho ela dia hanomboka hanjavona. Velona rehetra eo amin'ny carte. Isika ihany koa tamin'ny voalohany dia nividy an-trano, ary rehefa avy an-trano any Oslo. Ny zanabola amin'ny banky no tena ambany dia ambany: ny tao-trano, isan-jato.
Noho izany hofan-trano ihany ny mpianatra, ny sisa buy real estate.
No hevitry ny hoe"lafo vidy fandrika"rehefa hividy na inona na inona tianao, amin'ny trosa, ary ny vola taratasy ireo tsy mandray karama. Maro eto manao izany.
Raha manao izany ianao tao Norvezy na Etazonia, tsy maintsy manaisotra ny fananana.
Eto dia afaka miara-miaina amin'ny trosa any an-tapitrisa euros, ary izany dia mety hitarika olana amin'ny fividianana fananana izany amin'ny hafa findramam-bola ianao dia tsy handray.
Any Norvezy, avo dia avo ny fari-piainana. Tsy misy mety very trano na ny asa. Tena ela velona soa, ny zava-dehibe akaiky indrindra ny karama farany. Amin'io lafiny io, ny mponina dia omena. Sy ny aretina mpamelona ny fianakaviana, na olana ara-tsaina, toy ny kivy, ianao hanampy ny fanjakana. Na izany aza, maro ny olona fanararaotana izany ary dia narary nandritra ny taona vitsivitsy. Na dia ny olana vokatry ny fisaraham-panambadiana na ny rivo-piainana mahafinaritra any am-piasana dia afaka ny ho tonga amin'ny antony ny fanendrena ny tombontsoa toy izany. Maro ny talohan'ny fampakaram-bady ny raharaha tonga. Eto no tena fahita an-trano fanaovana tokantrano maso aloha. Ity Union ny olona manan-janaka, ho velona mandritra ny taona maro, ary rehefa afaka mora foana hanaparitahana, mahita mpiara-miasa hafa, ary manomboka ny fianakaviany indray. Ny fampakaram-bady ny lanonana ho an'ny olon-tsotra ao an-toerana, izay fotsiny ianao mba mandany vola bebe kokoa sy mameno kokoa ny taratasy. Ny ankamaroan'ny mpivady tsy hanambady. Mialoha ny fanaovan-tsonia momba ny fizarana ny fananana rehetra ho nizara amin'ity tranga ity, any amin'ny farany ny zava-drehetra mitranga tena haingana ary tsy misy ilaina ny mizara na inona na inona, ny filazana na hevitra mpisolovava. Raha ny olona manambady, dia ny zava-drehetra dia mizara koa. Any Norvezy be dia be ny mpifindra monina. Ny renivohitra dia mizara ho faritra roa: ny Andrefana sy ny Atsinanana Oslo. Ao amin'ny voalohany dia hita matetika Norwegians sy ny mpifindra monina, nanan-karena, ny faharoa indrindra avy any Shina, India, Pakistana sy ny sisa. Misy, ny trano fonenana, ny vidin-javatra sy ny vokatra eto ambany, ary koa eo an-toerana, dia te-hamonjy vola, isika mifindra any amin'ny faritra Atsinanan'i ny tanàna.
Fa misy ny sasany.
Any Norvezy, indrindra fa ny amin'ny tanàna kely mankasitraka na inona na inona asa. Tsy misy hevi-diso momba ny manadio gorodona na miasa ho toy ny fako ny hetra. Sy ny vahiny matetika dia tsy miasa sy miaina amin'ny fifanampiana. Izy ireo dia tsy afaka mifaninana amin'ny ny mponina ao an-toerana (izany dia ilaina mba hanamarinana ny fahalalana ny teny, ny zava-nitranga, ny fanabeazana sy ny sisa). Ny mpampiasa dia tsaratsara kokoa ny hitondra ny anarana, fa amin'ny fahazoana mazava tsara ny na ny fepetra. Na izany aza, be dia be ny mpitsidika avy teo akaiky teo States, izay mitady asa. Efa hahazo karama ambony noho ny mahery zavatra Krone. Noho izany dia misy be dia be ny lamba-blondes avy any Soeda, ohatra. Manaraka, dia mikasa ny hiditra ny mpampianatra Anjerimanontolo tsy miankina any Oslo, raha toa ka ny mpampiasa dia manaiky handoa ny saram-pianarana. Sy ny fanabeazana any Norvezy dia maimaim-poana ho an'ny isa avo ny fanadinana fidirana. Malahelo zavatra sarimihetsika, ny mozika, ny olona, ny fialam-boly. Maniry mafy ho an'ny fianakaviany, saingy mety tsy hiverina. Ny fianakaviana eto nanome marin-toerana ho avy.
kaip"Top-"pažinčių svetaines ir reitingas (m.)
hijery ny pejy Mampiaraka ny vehivavy ny lahatsary amin'ny chat tsy misy fisoratana anarana amin'ny zazavavy amin'ny chat roulette amin'ny finday jereo ny lahatsary amin'ny chat olon-dehibe Mampiaraka ny fisoratana anarana maimaim-poana amin'ny chat roulette fisoratana anarana online chat roulette tsy misy fisoratana anarana Fiarahana ho an'ny fifandraisana matotra video firesahana amin'ny aterineto tsy misy fisoratana anarana